musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Seychelles Nhau » Romance Guta reIndian Ocean
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Seychelles Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Idzo nhamba dzinotaura zvinonzwika kune yakasarudzika Indian Ocean archipelago, nevanhu vangangoita zviuru zvishanu vachisarudza kuita Seychelles yavo yemuchato kana yekuenda kuchando kusvika zvino gore rino - kuratidza kuti Seychelles inoramba sei iri nzvimbo inofarirwa kune vafambi vanobva pasirese.
Kubva kuvhurazve miganhu yayo, nhamba dzevashanyi dzakasimudzira kumashure kusvika makumi mashanu kubva muzana emazinga pre-COVID.
Vachangobva kuchata vakaverengera vangangoita 1 muvashanyi gumi kuenda kuSeychelles Islands muna 10.
Kunyangwe nehosha iyi, Seychelles yakawedzera kuzvisimbisa sehoneymoon capital yeIndian Ocean.
Ichinongedzera kupora kwakanaka kwekushanya kwenyika dzese, idzi nhau dzinouya seSychelles ichipfuura vashanyi vayo vekutanga zviuru makumi mashanu kubva pachikamu chekupedzisira chekuvhurwa kwayo pasi rose, nevashanyi vachiverengera yakakura 50,000 muzana yevatakurwi vese. Kubva kuvhurazve miganhu yayo, nhamba dzevashanyi dzakasimudzira kumashure kusvika makumi mashanu kubva muzana emazinga e-pre-COVID.
Kunyangwe paine kumanikidza kwedenda, Secheres yakawedzera kuzvisimbisa seguta remuchato reIndian Ocean. Dhata revafambi rakatorwa kuburikidza neSeychelles Islands Travel Authorization system inoratidza vanhu vanokwana zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nevasere vanosvika kumahombekombe ayo mukati memwedzi mitatu yadarika. Pakati pevava, vanhu vachangoroora vemuIsrael vakabuda pamusoro nemakumi mana nematatu emurume nemukadzi vakashanyira zviwi, vachiteverwa zvakanyanya neSaudi Arabia (3,852) uye UAE (3). Munguva imwecheteyo, Seychelles yaive zvakare nzvimbo yesarudzo yemichato 413 (vanhu zana nemakumi mana nevana).
Iine indasitiri yekushanya pasirese yakatarisana nenguva yakaoma, nzvimbo yezororo, kupukunyuka kunozivikanwa kunozivikanwa kune machena, jecha mahombekombe, inodziya mvura ye-turquoise uye dzakasiyana-siyana maruva nemhuka dzinoona nhamba dzayo dzekuuya dzichikwira zuva nezuva kubvira kuvhurwa musi wa25 Kurume 2021. Avhareji yekushanyira Seychelles mazuva gumi nerimwe, nguva yakakwana yekunakidzwa zvizere neruzivo rwemuno.
Kushanda kuona kuti Seychelles inoramba iri nzvimbo yakachengetedzwa neCOBV, iyo ichangoburwa Seychelles Islands Travel Authorization, inofambiswa neTravizory, inobvumira hurumende kuongorora uye kubvumidza vafambi vasati vasvika - kusanganisira kuongororwa kwePCR bvunzo uye zvitupa zvekudzivirira.
Maitiro ekupa mvumo anotora chete maminetsi mashanu kuti apedze uye anovimbisa rugare rwepfungwa kune vashanyi vari kutsvaga kutiza panguva yedenda. Kutora fungidziro kunze kwekufamba iyo Seychelles Islands Travel Authorization yakagonesa nyika yechitsuwa kuvhurazve zvakachengeteka uye zvine mutsindo.
Nezvirambidzo zvekufamba zviripo mune zhinji dzayo misika yechinyakare yeEuropean, Seychelles yakavhura miganhu yayo kune nyika zhinji uye yakanyora nhamba dzakanaka dzekuuya kubva kunyika dzakaita seUnited Arab Emirates (UAE), Israel, Germany neUkraine kune hafu yekutanga yegore.
Iine vashanyi vanosvika zviuru gumi vekuRussia vari kudirana mumahombekombe ayo, chitsuwa ichi chiri kutarisira kuti huwandu huchawedzera zvakanyanya kana dzimwe nyika dzeEurope dzasunungura zvirambidzo zvavo zvekufamba.
Seychelles iri kutarisira mazuva akajeka sezvo kuwanikwa kwendege kubva kuEurope, kumusha kumisika yayo mikuru, kunowedzera kubva munaChikunguru nekusvika kwaEdelweiss uye Condor neAir France zvingangodzokera kwaiendwa kwakataurwa muna Gumiguru 2021.
Mai Sherin Francis, Secretary-Secretary for Tourism, vakati: "Tiri kutarisira mazuva ari nani kumberi kweindasitiri, mabhaisikopo azvino ari kuratidza fungidziro dzatakaita pakutanga kwegore. Marekodhi ari kuratidza kuti Seychelles inogona kunge ichitambira pamusoro pe149,000 naZvita 2021, inova indasitiri ingave nhau dzakanaka kwazvo. "Tine chivimbo chekuti jekiseni rekudzivirira zvirwere richifambira mberi munyika dzakasiyana siyana, kuvimba kwevatengi kuchawedzera uye izvi zvinoita kuti zvive nani mugore rose."
VaAlan Renaud, Secretary-Secretary weCivil Aviation, vakati: "Kuisa mucherechedzo vafambi zviuru makumi mashanu kubva pakatangwa Sisitimu Yedu Yekugashira Chiitiko chiitiko chakakosha kuSeychelles, uye kuzviita panguva yedenda iri humbowo hwehuchenjeri hwekutarisa kwedu kwevatengi. uye sarudzo muhunyanzvi. Kuti isu takawana hafu yemazana edu e50,000 ekushanya mumavhiki matanhatu chete kubva pakatangwa kunosimbisa kusimba uye kukwezva kwenzvimbo yatinoenda. Tichitarisa kumberi, ticharamba tichiisa mari mune zvekufamba kuti tikwanise kushanya, zvichiratidza hunyanzvi hwetekinoroji kupa huwandu husingaenzanisike hwechigadzirwa uye kugona basa. ”